AFERA MBOLA RAJAONAH : « Tsy misy idiran’ny raharaha politika ankehitriny », hoy ny Bianco
Nitondra valin-kafatra manoloana ny resabe ezahina aparitaka etsy sy eroa ny teo anivon’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly na ny Bianco manoloana ny fanadihadiana ataon’izy ireo amin’i Mbola Rajaonah. 26 novembre 2018
Tamin’ny fanambaràna navoakan’ny Bianco no nitondran’izy ireo fanazavana fa tsy misy idiran’ny raharaha politika somary mafampana amin’izao fotoana izao akory ny famotorana sy ny fanadihadiana atao amin’ity mpanolotsaina manokana sy akaiky ny filoha teo aloha, Rajaonari-mampianina Hery ity. Nambaran’ny Bianco fa tsy vao izao akory fa efa tamin’ny taona 2017 tamin’ny alalan’ny rantsa-mangaikan’ny Bianco tao Toamasina no efa nisy ny fanadihadiana natao tamin’ i Mbola Rajaonah.
Efa nisy ny raharahana kolikoly nahavoasaringotra an’ity farany izay nandraisan’izy ireo andraikitra ka nanatanterahana fanadihadiana taminy. Araka ny fanazavana dia nisy ny famotorana lalina natao tamin’i Mbola Rajaonah ary mbola tohin’izany no antony nampanantsoana azy teny amin’ny foiben- toeran’ny Bianco teny Ambohibao ny 17 novambra lasa teo, izay niafara tamin’ny fisavana ny trano fonenany teny Ambohimahitsy sy ny toeram-piasany etsy Antsahabo sy tany Toamasina. Fantatra fa misy ireo milaza fa noho ny nisafidianan’ity mpandraharaha ity hanohana ny Kandidà Ravalomanana Marc no antony nandraisan’ny Bianco andraikitra ka anaovana izao fanadihadiana aminy izao.
Ao ihany koa ireo manaparitaka fa ireo heverina ho manam-pahefana sy ambony eto amin’ny firenena no maniraka ny Bianco hanao izany. Hentitra anefa ny teo anivon’ny birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly raha nilaza tao anatin’ity fanambaràna navoakany ity fa mahaleo tena tanteraka izy ireo amin’ny fanatanterahana ny asany ary tsy misy idiran’ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny ny famotorana izay ataon’izy ireo. Andrasana fatratra araka izany izay valin’izao fanadihadiana ataon’ny Bianco izao. Miandrandra ny vahoaka rehetra mba hisy vokany tsara izao fanadihadiana mifototra amin’i Mbola Rajaonah izao mba tsy hisy intsony ireo tsy matimanota eto amin’ny firenena.